Ny CarPlay dia ho tonga amin'ny maodelin'ny BMW ary tsy misy tariby | Avy amin'ny mac aho
Na dia ny vaovao ananantsika momba azy aza CarPlay Izy ireo dia zara ary misy elanelam-potoana raha toa ka ampitahaintsika amin'ny zavatra avoaka isan'andro mifandraika amin'ny fitaovana sy serivisy hafa an'ny paoma manaikitra, Tsy midika hoe mikatso na lasa hadinon'ny olona.
Ny taona 2016 no taona nofidian'ny mpamokatra fiara maro hampidirina ao amin'ny rafitr'izy ireo ao amin'ny Apple CarPlay. Ny zavatra iray mazava dia ny Apple dia miasa amina tetikasa miafina fantatra amin'ny hoe Titan and izay misy ifandraisany amin'ny fiara, fa amin'izao fotoana izao no hany zavatra azontsika resahina momba ny fiara dia ny CarPlay.
Mpanamboatra maro no efa nampiditra ny rafitra CarPlay ao amin'ny rafitry ny fiaran'ny fiaran'izy ireo, amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny rafitry ny feon'ny fiara dia manana efijery misy loko izy izay mamela ny fampiasana an'ity rafitra iOS namboarina ity ao anaty fiara. BMW dia tsy te ho tavela ary efa fantatra izany amin'ny faran'ny 2016 ny sasany amin'ireo fiarany avo lenta dia hanana CarPlay.
Ny maodely BMW anao miresaka momba ny BMW X5 sy X6 M isika, fiara izay manana efijery mikasika LCD misy santimetatra betsaka kokoa noho ny iPad 9.7-inch ary mahatratra 10.25 santimetatra ny diagonal.
Zava-baovao iray hafa re fa ny haben'ny diagonal ity dia ho tonga voalohany ny CarPlay tsy misy tariby ary izany dia mandra-pahatongan'ny famoahana ny iOS 9 ny fomba tokana hifandraisana amin'ny CarPlay dia amin'ny alàlan'ny tariby ary mbola izany hatrany . satria ny ankamaroan'ny fiara dia tsy nampihatra ny mety misy Wireless
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny CarPlay dia ho tonga amin'ny maodely BMW sasany ary tsy misy tariby
Vetivety ianao dia afaka mamaha ny Mac amin'ny alàlan'ny Touch ID amin'ny iPhone